वाग्मती प्रदेशमा हालसम्मकै धेरै संक्रमित फेला- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २२, २०७७ बबिता शर्मा
तपाईंको नजरमा नेकपा देशका लागि समस्या हो कि समाधान ?
समस्या पनि हुन सक्छ, समाधान पनि । नेकपा स्वयंको व्यवहार, काम र उसले देशलाई लान खोजेको दिशामा भरपर्छ । देशलाई राम्रो दिशामा लगेको छ, राम्रो कर्म गरेको छ, भटाभट देशलाई रुपान्तरण हुने काम गरेको छ भने त्यो समाधान हो । देशलाई महामारीको बेलामा समस्यामाथि समस्या थप्ने, समृद्धिको दिशातिर भन्दा ओरालोतिर लैजाने काम गरेको छ भने समस्या हो । त्यसकारण उसको व्यवहारमा भरपर्छ ।
अहिले कुन दिशामा गएको देख्नुहुन्छ ?
अहिले समाधानतिर छैन । कोभिड १९ को सन्दर्भमा केही राम्रा गरेको छ । सुरुमा जति गर्‍यो पछिल्ला दिनमा त्यो पनि छैन । नक्सा जारी गरेर ठीकै गर्‍यो । त्यो बाहेक देशको समृद्धि, रुपान्तरणतर्फ छैन । कृषि, औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा जनताले खोजेको परिवर्तन हो । यी क्षेत्रमा समाधान दिन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा जे जस्तो थियो त्यही दिशामा छ ।
सरकार गठनपछि नेकपा कहाँबाट गलत बाटो हिँड्यो ?
दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार आइसकेपछि नागरिकले खोज्ने भनेको समाजवाद उन्मुख रुपान्तरण हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेको छ । बढीभन्दा बढी जनता कृषिमा छन् । मान्छेले परिवर्तन खोज्ने सबैभन्दा धेरै कृषिमा हो । कृषिमा परिवर्तन गर्ने त कता हो कता ९० अर्बबाट ४० अर्बमा बजेट झार्‍यो, पहिलो बजेटमा । दोस्रोमा त्यो भन्दा तल, तेस्रोमा झन् तल । ४३ लाख मानिस मुलुक बाहिर छन् । तिनलाई ल्याउने भनेको औद्योगिक क्रान्त्रिबाट हो । त्यसमा नेकपा सरकारले छेउटुप्पो सुरुवात गरेको छैन । रेमिन्ट्यान्समा गौरव गरेको छ ।
अर्को, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हो । धेरै मानिसहरूले पैसा जम्मा गर्ने छोराछोरीको शिक्षा र आफ्नो स्वास्थ्यका लागि हो । अहिले शिक्षा नाफाखोर निजीको हातमा छ । प्रधानमन्त्री आफैं आहृवान गरिरहनु भएको छ कि सरकारी स्कुल पनि निजी नाफाखोरले लिइदिनु पर्‍यो भनेर । जबकि संविधानमा शिक्षा सबै राज्यको जिम्मा भनेको छ । संविधानको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्रीको आहृवान छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क भनेको छ । तर, अहिले कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शुल्क नतिरी उपाचार गर्न सकिँदैन । ठुल्ठूला रोग लाग्यो भने बिल्लिबाठ नै हुन्छ । अब भनौं सरकारले कुन काम ठीक गर्‍यो ?
सरकारले सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री त्यस्ता छन्, जसको सन्तान छैन । कसका लागि कमाउने ? तर, यी प्रधानमन्त्रीले त गरिखालन् भनेको, देखिएन । कालोसूचीमा परेको मान्छे लगानी बोर्डको सिईयो, ओम्‍नी प्रकरण, यती प्रकरण, स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न भन्ने कुरा लगातार आइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले सुशासन दिन नसकेको हो । जनतलाई भ्रष्टाचारमुक्त शासन दिन सकेन । बीपी कोइरालाको पालामा पनि यति धेरे बहुमत थिएन । माथि झन्डै दुई तिहाई, सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा सरकार, ४ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा सरकार छ । यत्रो बहुमत नेपालको इतिहास कसैको थिएन । परिवर्तन गर्ने यस्तो अवसर आउँदा पनि गुमाइरहेको छ ।
यसमा को कति जिम्मेवार हो ?
सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रालय हुन् । दोस्रो, उहाँहरू गलत बाटोमा जाँदा सही बाटोमा ल्याउने जिम्मा पार्टीको हो । मतलब सरकार नियन्त्रण र गाइडेन्स पार्टीको रहन्छ । अहिले न पार्टीले नियन्त्रण गरेको छ, न गाइड गरेको देखिन्छ ।
मतलब समस्या कहाँनेर हो ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी नमान्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिन्छ । व्यक्ति नै राष्ट्र हो भनेर दूर्योधनले भन्थे रे । उहाँ पनि त्यस्तै हो । म नै पार्टी हो भन्ने भाव छ । हात्तीले पुच्छर हल्लाउन पर्नेमा पुच्छरले हात्ती हल्लाइरहेको छ । पार्टी भनेको हात्ती हो । सरकार भनेको पुच्छर हो । पार्टीको घोषणापत्र पार्टीको निर्देशन हो । घोषणापत्रको आधारमा भोट आएको हो । घोषणापत्र सबै रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर सरकार चलाउनु नै गल्ती भयो । पार्टीको निर्देशन नमान्ने, पार्टी बैठकमा नजाने, केन्द्रीय समितिको एक चौथाई सदस्यले बैठक माग गर्दा बस्न नमान्ने । यो अराजकता हो । नेकपामा अध्यक्ष स्वयंबाट अराजकता सिर्जना भएको छ ।
नेकपामा अहिले जुन विवाद छ, यसको भित्री उद्देश्य के देख्नुहुन्छ ?
दुई उद्देश्य छन् । पहिलो, सरकारमा गइसकेपछि अनन्तकालसम्म टिक्ने । पार्टीको नियन्त्रण र निर्देशनभन्दा बाहिर रहने । फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्ला । सरकार प्रमुखको ‘इन्ट्रेस्ट’ देशलाई परिवर्तन, रुपान्तरण गर्ने भन्दा पैसामा देख्छु । मुख्य ध्यान पैसामा छ । चाहे यति होल्डिङ्स होस्, चाहे ओम्‍नी, चाहे भर्खरको भट्ट प्रकरण, चाहे पूर्वसञ्‍चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण । सबै प्रकरणको जरोमा पैसा छ ।
एमसीसी पनि कारण हुन सक्छ कि ! किनभने पार्टीबाट कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुने भएन । नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने, बरु पार्टी फुटोस् एमसीसी पास गर्ने भन्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि हुन सक्छ ।
तर, नेताहरू यो पदको लडाइँ हैन विधि पद्धतिको लडाइँ हो भनेर दाबी गरेका छन् त ?
यो पार्टी नै वैचारिक, सैद्धान्तिक जगमा उठेन । पार्टी एकीकरण हुँदा गणितीय जोड घटाउमा आधारित भयो । न कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक छलफल भयो । अहिले कुनै विचार, सिद्धान्तको लडाइँ भइरहेको छैन । नेताहरू भन्न त भनिरहेका छन् कि यो विधि र पद्धतिको लडाइँ हो भनेर । तर, मलाई अध्यक्ष, मलाई प्रधानमन्त्री भएदेखि सबै मिल्छ भनेको के त ? त्यो भनेको पद्धतिको लडाइँ त हैन । पद्धतिको लडाइँ भए पद्धति ठीक नभएसम्म मिल्दैन, सहमति हुन सक्दैन भन्थे । त्यो त छैन । यो लडाइँ विल्कुलै सत्तास्वार्थको हो । यो लडाइँ व्यक्ति, समूहको हो ।
नेकपामा अहिले जे जस्तो लडाइँ छ, यो देश र जनताका लागि कति दुर्भाग्यपूर्ण छ ?
ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण हो । दुर्भाग्य यसकारण कि देश कोभिड–१९ को महामारीमा छ । त्यसमाथि भारतले आचेटेको छ कि नक्सा प्रकाशन गरेर हाम्रो भूमिमा सडक बनाईसक्यो । अर्कोतर्फ बाढी, पहिरोको समस्या छ । यस्तो बेला सिंगो देश एकढिक्का हुनुपर्ने हो ।
तर, झगडाको थालनी प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुभयो । पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर । फेरि पार्टीका मान्छे भारतसँग मिलेर मलाई सत्ताच्यूत गर्न लागे भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्दैमा पार्टी सति जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यो बेलामा उहाँहरू यस्तो झगडा किन गरेको ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो वा अध्यक्ष छोड्नुपर्ने हो भने छोटो बाटो त उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल समूह) सँग । संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत छ, बहुमतबाट दलको नेता हटाउने । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमत छ, बहुमतबाट अध्यक्ष हटाउने ।
महिना दिनको गलफती किन ? ओलीले बदमासी नै गर्नुभएको हो भने हटाइहाल्नु नि ! पार्टी फुटे फुट्छ, जुटे जुट्छ । पार्टी एक ढिक्का रहिरहनुपर्छ भने यति लामो गलफती किन ? त्यसकारण यस्तो बेला झगडा गर्नु देश र जनताको लागि दुखद् हो ।
नेकपामा एउटा समूह ओलीको राजीनामा मागेको छ । यदि सरकारको नेृतत्व परिवर्तन भयो भने तत्कालका लागि त घरझगडा हल होला, त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्नेले केही चमत्कार गर्ला ? कि जो आए पनि ओलीकै नियती भोग्ने हो ?
गाडी चालकमा भर पर्छ । चालक उत्तिकै जड्या हो भने त्यसले त के फरक पर्छ र ! पहिले पनि चालक ठीक छैनन् । देशले त्यो भोगेकै छ । कामै नगर्ने असक्षम, अयोग्य मान्छे हो उहाँ (ओली) ।
खाली नक्सा जारी भएको र कोभिड–१९ को समयमा झगडा गर्ने होइनमात्र भनेको हो । तर, उहाँ (ओली) देश चालाउन योग्य होइन । उहाँको स्वास्थ्यको कारण पनि सक्षम होइन, योग्यताको कारण पनि सक्षम होइन । समयको हिसाबले मात्र यतिबेला सिंगो देश एउटा मान्छेको वरिपरि एक ढिक्का हुनुपर्ने हो । भोलि उहाँको ठाउँमा त्यस्तै मान्छे आयो भने देशलाई केही फरक पर्नेवाला छैन । तर, नयाँ पुस्ताको स्वच्छ, सक्षम व्यक्ति आयो भने फरक पर्छ । अहिले देशलाई नयाँ पुस्ताको खाँचो छ । कालेको ठाउँमा राते आएर उही स्वभाव, उही चरित्र, उही प्रवृत्ति भो भने फरक पर्दैन ।
तपाईंले देख्नु हुन्छ त्यस्तो सक्षम नयाँपुस्ता ?
छन्, नयाँ पुस्तामा मान्छे नभएका होइन । उनीहरूले मन्त्री हुँदा काम गरेर देखाएको आधारमा हेर्ने हो । अनुमानको आधारमा भन्ने होइन । ती मान्छेमा सत्ता हस्तान्तरण भयो भने फरक आउँछ । तर, हिजो अवसर पाएका मान्छे फेरि आएर त के फरक पर्छ र ? कुनै परिवर्तन आउँदैन । सत्ताको नेृतत्व परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले होइन केही समय पछाडि । तर, अहिले नै हुनुपर्छ भने पहिला असफल सावित भएको व्यक्ति फेरि नेतृत्वमा आउनु हुँदैन ।
तर, यसो हेर्दा प्रधानमन्त्रीको लाइनमा पुरानै नेतृत्व देखिन्छन् नि ?
पहिला अध्यक्ष, महासचिव भएका फेरि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अवसर थियो त । के गरेर देखाउनु भयो प्रधानमन्त्री हुँदा ? हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो । ०६५ मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर आएको हैन ? त्यतिखेर उहाँले परिवर्तन थाल्नु भएको भए सारा नेपाली परिवर्तनको लागि तयार थियो । परिवर्तन विरोधिहरू पनि थर्रथर्र कामिरहेका थिए । त्यतिखेर थालनी गर्नु भयो त ? गर्नुभएन । उही मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री दिनुको तुक के छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्री असक्षम, अयोग्य त हुँदै हो । एउटै कुराले मात्रै हो कि प्रधानमन्त्री हटाउने यो कुनै समय होइन भनिएको ।
यी समस्या तीन/चार महिनापछि सकिएला । त्यसपछि पनि योग्य हो त ? तीन वटा बजेट त उहाँ (ओली) ले ल्याइसक्नु भयो । केही आयो परिवर्तन ? छैन नि । त्यसोभए अर्को अध्यक्ष योग्य हो त भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, पात्र बदलेर मात्र हुन्न । प्रवृत्ति बदलिएको पात्र चाहियो । नयाँ सुन्दर गाडी छ तर चालक एक नम्बर जड्या । भएको यही हो । चालक बदल्नु पर्‍यो । चालक बदलिएन भने केही समय पछि प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
दुई वर्षपछि चुनाव होला, एउटै पार्टीमा चुनाव लड्छन कि फेरि गठबन्धनतिर फर्केलानन् ? कस्तो देखिन्छ चित्र ?
अहिलेको द्वन्द्व के मा रुपान्तरण हुन्छ भन्नेमा भरपर्छ । उहाँहरूको पार्टी लगभग फुटिसकेको छ । पार्टीको अध्यक्ष बैठकमा नजाने भनेको फुटेको हो । बाहिर घोषणा हुन बाँकी मात्र हो । त्यो वास्तविक फुटमा परिणत भएर गयो भने उहाँहरूको पार्टी छताछुल्ल, भताभुंग हुन्छ ।
अहिले उहाँहरूको पार्टी केही तन्तु, केही व्यापारीले जोड्न लागेको भन्ने पनि आइरहेको छ । यो अचम्मको कुरा छ । त्यसकारण कसले के गर्छ भन्ने ठेगान त छैन । तर, नेकपा धेरै लामो समय जाने देखिएन । अर्को चुनवासम्म टिक्छ टिक्दैन भन्नेमा ठूलो शंका छ ।
नेकपाका कतिपय नेताहरू कोरोनासँगै पार्टी र सरकारको इज्जत जोगाउन पनि मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने भयो भनिरहेका छन् । तपाईं के ठान्नुहुन्छ, नेकपाका नेताहरूको प्रतिष्ठा यतिबेला धरापमा छ हो ?
नेकपाका नेताहरूको सबै कुरा धरापमा छ अहिले । उहाँहरूले काम गरेर देखाउनु भएको छैन । पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार छैन । सरकार आफ्नै नियन्त्रणमा छैन, व्यापारीको नियन्त्रणमा छ । पार्टीभन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो, प्रधानमन्त्रीभन्दा व्यापारी ठूलो । वास्तवमा उहाँहरू आफ्नै नियन्त्रणमा आफू हुनुहुन्न ।
एउटै पार्टी रहेमा फेरि मतदाताकहाँ जाँदा के मुद्दा लिएर जालान् ?
लाजमर्दोस्थित छ उहाँहरूको । अघिल्ला मुद्दाहरू कार्यान्वयन भएको छैन । शिक्षालाई जनमुखी, समाजवादी बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभयो । आयोग पनि बनाउनु भयो । आयोगको रिपोर्ट बालुवाटारमा लुकाउनु भयो । अहिलेसम्म आठ वटा आयोग बनेका छन् । सबै आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । यही आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन । जुन शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको छ ।
उहाँहरूले न त कृषि क्रान्ति, न त औद्योगिक क्रान्ति, न त शिक्षा, स्वास्थ्यमा हेरफेर, न त भूमिसुधारको योजना केही छैन । नेपालमा स्रोतको अभाव हैन, नेतृत्वमा व्यवस्थापनको अभाव हो । उहाँहरूसँग मुद्दा त छन् । तर पत्याइदिने कस्ले ? अघिल्लो चुनावमा प्रतिबद्धता जनाएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने दोस्रो चुनावमा विश्वास गर्ने कस्ले ? मुद्दा हुने विश्वास गर्ने मान्छे हुने छैनन् ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ २०:५४